Serivisy fanodinam-bokatra CNC, faritra misy milina CNC, faritra vy vita amin'ny CNC - BXD
Serivisy fanodinana masinina CNC (3-, 4- & 5-Axis) ho an'ny famokarana avo lenta avo lenta.
Ny serivisinay fikolokoloana CNC dia afaka manome ampahany marina ho an'ny tetikasanao.
Ny lathes isan-karazany misy ny lathes CNC sy ny ivon-toerana misy antsika dia ahafahanao mamokatra faritra mihodina kokoa.
Serivisy ao anatin'izany ny fanapahana laser, totohondry, miondrika, fametahana rivet ary fantsona sns.
Aluminium firaka 6061 CNC mihodina faritra ho an'ny Lithi ...
Machining Machining an'ny Galvanometer Box ho an'ny UV ...
Ahoana ny fomba fiasan'ny BXD
Ampidiro ny sary
Hamafiso ny endrika
Atombohy ny famokarana
Traikefa 10 taona mahery
BXD hatramin'ny taona 2010, ny injenieranay dia efa nanolotra serivisy fanodinana cnnc nandritra ny 10 taona mahery ary nanangana traikefa manankarena tamin'ny tetikasa maro teo aloha, afaka mitantana ampahany sarotra sy mazava tsara izahay nefa tsy misy olana.
Fanamarihana haingana, fandefasana ara-potoana
Amin'ny antsalany dia averinay ny teny nindramina tao anatin'ny 24 ora, ny sombin-tsambo dia alefa ao anatin'ny 7 andro na latsaka, ary manana 99% ora ara-potoana sy tahan'ny kalitao izahay.
Fitaovana feno, vahaolana tokana
BXD dia manana fitaovana feno amin'ny famokarana sy ny fanandramana. Hanome serivisy milina fijanonana tokana ho anao izahay avy amin'ny akora farany mandra-pahavitan'ny vokatra.
ISO9001: 2005 voamarina
Ny orinasanay dia ISO9001: 2005 mpanamboatra voamarina amin'ny vokatra avo lenta
Manaraka ny fizotrany henjana izahay ho an'ny faritra misy anao hatrany mahafeno ny fenitra faran'izay avo lenta.
Izahay dia miantoka ny fiarovana ny IP-nao
faritra manokana izao
Azafady mba avelao izahay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay. Azo antoka sy tsiambaratelo ny fampidinana rehetra
Machining Axis 5 ho an'ny faritra sarotra
Inona ny machining CNC 5 Axis ary inona ny tombony? Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny famokarana cnc axis dimy dia nanjary be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany. Amin'ny fampiharana azo ampiharina, rehefa mihaona amin'ny fahombiazana avo lenta sy avo lenta ny olona amin'ny endrika sarotra par ...
Fiantohana kalitaon'ny BXD
Ny kalitao no antoka matanjaka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, mazava ho azy, ny fanodinana famokarana no lakilen'ny kalitaon'ny vokatra, ny fizahana no antoka ho an'ireo vokatra. Ny BXD dia narahina mafy tamin'ny SOP ho an'ny fizotry ny famokarana. Ny vokatra miorina sy mendrika ...
Mitadiava mpanamboatra milina CNC any Shina
Mitadiava mpanamboatra milina CNC ao Shina BXD dia orinasa mpamokatra milina cnc matihanina 11 taona any Shenzhen China, manolotra serivisy any Shina mandritra ny 11 taona izahay ary manana mpanjifa sasany any Etazonia, Singapore, Malaysia, UK sns amin'ny faritra maro. indostria. Antenainay...
Iza no iarahantsika miasa